London oo laga qaadday Martigelinta Xafladda Xiddiga Adduunka ‘The Best’ | Wardoon Wardoon.net - Somali News
London oo laga qaadday Martigelinta Xafladda Xiddiga Adduunka ‘The Best’
Xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ka rartay magaalada London martigelinta xafladda xiddiga adduunka ee sannadlaha ah ee The Best oo sannadkii hore lagu qabtay London.
FIFA ayaa bishii September ee sannadkii hore ee 2018 ay iclaamisay in Luka Modric uu ahaa laacibkii ugu fiicnaa sannadkii dhamaaday, waxaana xaflad qurux badan oo lagu qabtay magaalada London lagu guddoonsiiyey abaal-marintaas oo ahayd markii labaad ee FIFA bixiso.
Cristiano Ronaldo oo sannadkii koowaad ee FIFA ay bilowday abaal-marintan ku guuleystay, ayaa markanna kaalinta labaad galay, waxaana kaalinta saddexaad fadhiistay Antoine Griezmann, halka uu Lionel Messi markii koowaad muddo toban sannadood ah ka maqnaaday saddexda ugu fiican.
Sannadkii 2017 ayaa waxa xafladda ‘The Best’ ay FIFA ku qabatay magaalada Zurich, hase yeeshee sannadkan ayaa waxa lagu qaban doonaa magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga, gaar ahaan dhismaha Teatro alla Scala, kaas oo si qurux badan loo sii sharrixi doono ka hor 23 September oo ah maalinta ay xafladdu dhici doonto.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska maamulka FIFA ayaa waxa lagu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin fursadda qaaliga ah ee maamulka magaalada Milan iyo hoolka Teatro alla Scala ee ah martigelinta xafladda abaalmarinaha ‘Best FIFA Football Awards’.
FIFA ayaa waxa sheegtay in sannadkan 2019 ay qayb weyn ku yeelan doonaan haweenka oo Koobka Adduunka ee dumarka bilaha June iyo July lagu qaban doono France.
Luka Modric ayaa abaal-marinta dhinaca ragga qaatay sannadkii tegay, halka haweenkana ay gabadha reer Brazil ee Marta ku guuleysatay.